के भन्यो ? | suryakhabar.com
Home के भन्यो ?
काँग्रेससहित ६ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दियो कडा निर्देशन, के भन्यो ?
on: January 02, 2018 In: पु.समाचारTags: काँग्रेससहित ६ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दियो कडा निर्देशन, के भन्यो ?No Comments
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेससहित ६ पार्टीलाई प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फको सूची सच्याउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले उमेदवारको सूचीलाई तीनदिनभित्र सच्याउन निर्देशन दिएको छ...	Read more
विवेकशील साझाले गर्यो प्रधानमन्त्री देउवामाथि यस्तो आशंका, के भन्यो ?
on: January 01, 2018 In: राजनीतिTags: के भन्यो ?, विवेकशील साझाले गर्यो प्रधानमन्त्री देउवामाथि यस्तो आशंकाNo Comments
काठमाण्डौ । विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहज सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विवेक...	Read more
on: December 31, 2017 In: पु.समाचारTags: उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दीबारे बोल्यो नेकिपा, के भन्यो ?No Comments
भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले विश्वमा नयाँ युद्धको खतरा बढेको बताएका छन् । नेपाल प्राध्यापक समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘समाजवादी आन्दोलनको विगत र वर्तमान’ व...	Read more